I-Apple isungula i-beta yesibini kawonkewonke ye-macOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.2 | Ndisuka mac
U-Apple ukhuphe uguqulelo lwesibini lwe-beta yoluntu izolo emva kwemini kubasebenzisi ababhalise kwinkqubo ye-beta. Inguqulelo yonjiniyela isungulwe nje ngoMvulo kwaye kwiiyure kamva inguqulelo yabasebenzisi ababhalisiweyo kule nkqubo ye-macOS beta ifikile.
Iimpawu ezintsha eziphunyezwe kule beta 2 ziqhelekile ukuphuculwa kwenkqubo yokusebenza, uzinzo, kunye nokulungiswa komcimbi wokhuseleko ngeWPA2, Into esele ikho okanye ekufuneka ilungisiwe kwezi nguqulelo ze-beta. Inyani yile yokuba iindaba zimbalwa kodwa zibalulekile.
Ukufika kwangoko kwale beta intsha yoluntu kubonisa ngokucacileyo ukuba akukho ngxaki ekusebenzeni ngokubanzi kuhlobo lwe-beta kubaphuhlisi kwaye ke isebenza ngokupheleleyo ukukhupha njenge-beta kawonke-wonke. Ukuba ungomnye wabasebenzisi abafuna ukuthatha inxaxheba kwi-macOS High Sierra yoluntu betas, Sincoma ukusebenzisa ukwahlula ngaphandle kwenkqubo yakho yokusebenza ngaphandle kwento yokuba yonke into isebenza kakuhle kwasekuqaleni. Ungalibali ukuba ezinye iinkqubo, izixhobo okanye imisebenzi inokungahambelani neenguqulelo ze-beta. Ngayiphi na imeko, ukuba unomdla wokuthatha inxaxheba, ikhonkco lokubhalisa kunye nokufumana ezi nguqulelo ngaphambi kokuba uninzi lwabasebenzisi lufumane ingxelo esemthethweni. simka apha.
Uphuculo olwenziweyo kule nguqulo intsha ye-beta 2 ikhutshelwe abaphuhlisi kunye nabasebenzisi abathatha inxaxheba kwinkqubo kawonkewonke ye-beta, Ayizongezeli izinto ezintsha ezinobuhle, nangokubhekisele ekusebenzeni kwenkqubo ye-APFS kukungangqinelani kwenkqubo kunye neFusion Drayivu, kodwa bayongeza ukuphuculwa kwezokhuseleko, ukuzinza kunye nokusebenza kwenkqubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Mac OS X » i-MacOS High Sierra » I-Apple ikhupha iBeta yesiBini yoLuntu yeBeta ye-MacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.2
Sivavanye i-Aukey KM-G6 ye-LED-Backlit etshintsha iBlue Blue keyboard
Uxinzelelo lwe-EU ngu-Apple ngokuzibandakanya kwakhe "kwiiPhepha zeParadesi"